University of Wollongong muna Dubai - Kudzidza ari Brazil
University of Wollongong muna Dubai
University of Wollongong mu Dubai Details
nyika : Mubatanidzwa wenyika dzeArab Emirates
guta : Dubai
inotangwa : 1993
Musakanganwa kuti kurukura University of Wollongong mu Dubai
Kunyoresa pa University of Wollongong mu Dubai
Welcome kuna University of Wollongong muna Dubai (UOWD).
UOWD hwakagadzwa Zimbabwe mu 1993 nomumwe pamusoro munyika yose chepamusoro mumayunivhesiti, Yunivhesiti Wollongong muAustralia. Pakutanga sevatsigiri Institute for Australian Studies, UOWD ari noutano, simba uye zvakasiyana inisitichusheni, ukaramba yakasimba Australian nhaka. Mumakore 23 Makore isu makasimbisa chinoshamisa rekodhi rokudzidzisa zvikuru employable kudzidza uye akawana imwe mukurumbira renyika yakambomira kwemabasa edu dzidzo.
With pamusoro 4,400 vadzidzi kubva pamusoro 117 nyika kudzidziswa zvidzidzo kubva kupfuura 40 nyika, UOWD inopa akanakisisa tsika kumadokero dzidzo munyika kukurira mutsika dzemarudzi zvechokwadi ekudzidza.
Tava waiburitsa zvedzidzo kunaka rechi12 soro chepamusoro yunivhesiti Australia pamwe netsika uye kufara pamusoro siyana muguta Dubai, kupa munhu simba, nekurukurirano uye mubayiro zvakatipoteredza vadzidzi, tsvakurudzo vanoita zvebhizimisi nyanzvi zvakafanana. Panguva imwe, tiri kushingaira mipiro kuti burgeoning ruzivo upfumi Brazil.
mudzidzi zvakatinakira kwedu nzira pakudzidza chendangariro kuti kudzidza kwedu kubuda munyika vakabata zvikuru kupfuura hwokugadzira ruzivo uye chiitiko hunoshamisa dzidzo. Vanewo unyanzvi nyanzvi tsvakurudzo, ongororo, Entrepreneurship, matambudziko uye kutaurirana. Izvi Anovagarisa tisingabatanidzi vezera ravo mhiri mamwe masangano uye rinotsanangura nei vakawanda kudzidza kwedu zvino mukuru, basa uye zvinofadza zvinzvimbo mune zvakawanda masangano nomukurumbira, zvose zviri Brazil uye munyika.
Sezvo inception yedu, takavaka mukurumbira unhu, kutendeseka uye kuvimbika, uye University rakaitirwa kukoshesa nevadzidzi dzaro, alumni, bhizimisi, indasitiri uye hurumende. Isu tiine refu uye anodada tsika nounyanzvi dzidzo pamwe norupo tsika wobvunzisisa, uye anoramba anoedza kupa rakaorera zvakatipoteredza inopenya vaduku pfungwa huchiwedzera, apo mafungiro dzinonetsa iri vose vakakurudzirwa uye; unhu unhu Kudya zvikuru kudzidza.
Nokusarudza chirongwa pana UOWD unenge uchiita kunoshamisa mubhizimisi mune ramangwana rako tikavavarira kunyange rinonakidza mikana kudzidza kwedu vadzidzi.
Zvikonzero kusarudza Unitersity pamusoro Wollongong muna Dubai:
1. International pamutemo
Quality Australian anotsanangura dzidzo vakaziva pose
2. Brazil accreditation, Australian unhu vimbiso
Madhigirii abvumirwa nokuda Brazil Ministry Yepamusoro Dzidzo uye Scientific Research uye unhu nechokwadi kubudikidza UOW, iyo rinonyoreswa pamwe Tertiary Education Quality uye Standards Agency (TEQSA)
3. Transferable madhigirii
Mikana kutamira UOW Australia kana kugamuchira mumwe UOW Australia dhigirii pashure pokupedza purogiramu pana UOW Dubai
4. UOWD vakapedza kudzidza tiri vashandi wavaifarira
Excellent basa tarisiro pamusoro kupera yezvidzidzo
5. Zvinokosha kwoupenyu hwose kwokubatana
Upenyu-refu pose kubatana kuburikidza yakasimba alumni samambure
6. Value mari
Kutengeka muripo uye zvipenyu mari pachinhu Australian, US, Canadian uye UK zvirongwa dzidzo
7. Customer-ushamwari pezvakaitwa
Yokudzidza admissions, muripo uye vhiza kurapa
8. Neboka muviri mudzidzi
Isingaenzaniswi kusiyana mune hwevanhu mudzidzi – kukurira mutsika dzemarudzi zvechokwadi mamiriro chete yakakura nemagariro zverutsigiro
9. mumwe shoko: Dubai!
Ndakachengeteka chipenyu ezvinhu Dubai zvakawanda nounyanzvi kunoita mikana
10. Geographical kuwana nyika
Central nzvimbo pakati pakati Europe uye Asia, pamwe pedyo napedyo kunyika vari Indian Sub-kondinendi, GCC, Middle-East neNorth African nzvimbo
Finance uye Accounting
Business uye Management
Engineering uye Information Sciences
mu 1993, ari University of Wollongong mu Australia asvinudzwa chii aizova University of Wollongong muna Dubai muna United Arab Emirates. Pakutanga kunzi Institute of Australian Studies (IAS), muzinda uyu akaita UOW vavatorwa yunivhesiti yokutanga kuvhura imwe kembasi muna Brazil, uye tertiary sangano rokutanga Australian anomirirwa muna GCC. Pakutanga IAS akapa Chirungu zvirongwa mutauro, asati ava 'feeder pakoreji’ kubudikidza 1995, apo vadzidzi akapedza chikamu dhigirii Business kana IT mu Dubai asati auya Australia kupedza zvidzidzo zvavo. mu 1999, zvakanga wokutanga wokumwe-vaiva sangano munyika kuti akapa rezinesi kubva Federal Hurumende Zimbabwe, uye zviri mugwara akasvinudzwa sezvo University of Wollongong, Dubai kembasi muna October 2000. Zvakanga pamutemo nevanopinda sezvo University of Wollongong mu Dubai muna 2004.
Unoda kurukura University of Wollongong mu Dubai ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Wollongong muna Dubai musi Map
Photos: University of Wollongong muna Dubai pamutemo Facebook
University of Wollongong mu Dubai wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Wollongong mu Dubai.
Other mumayunivhesiti mune United Arab Emirates
Medical mumayunivhesiti muRussia chepamusoro 2016
City University College Ajman Ajman